Nnwale COVID 'ọhụrụ nke nka' n'ọdụ ụgbọ elu Liverpool John Lennon
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airport » Nnwale COVID 'ọhụrụ nke nka' n'ọdụ ụgbọ elu Liverpool John Lennon
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Technology • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ UK na -agbasa
Ọdụ ụgbọ elu Liverpool John Lennon nwere ike nye ndị njem ụgbọ elu ebe nnwale COVID ọgbara ọhụrụ na saịtị n'ọdụ ụgbọ elu ka ọ na-amalite ịmalite usoro ụgbọ elu ya ma nwekwuo ndị njem na-efe efe ọzọ.
A na -emepe ụlọ nyocha nnwale PCR ọhụrụ na ọdụ ụgbọ elu Liverpool.
Ụlọ nyocha ọhụrụ nwere ike ịme ule 500 kwa ụbọchị.
Ọdụ ụgbọ elu Liverpool bụ onye mbụ na UK nwere ụdị ọrụ ahụ pụrụ iche.
Ụlọ ọrụ ahụike Britain na ụlọ ọrụ nnwale Salutaris Ndị mmadụ-nke na-arụ ọrụ nnwale PCR ngwa ngwa maka ndị njem ụgbọ elu na ọdụ ụgbọ elu Liverpool John Lennon, na mmekorita ya na Test Assurance Group Ltd (TAG (Onye ọrụ nnwale Covid-19 na ọdụ ụgbọ elu Liverpool John Lennon)-ekpughere taa. ụlọ nyocha nnwale COVID ọhụrụ na ọdụ ụgbọ elu Liverpool John Lennon.
Ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ na mmekorita ya na Source BioScience-onye na-eweta mba ụwa na-eweta ọrụ ụlọ nyocha maka ndị ahịa na ụlọ ọrụ ọgwụ, ahụike, ụlọ ọgwụ, nyocha sayensị ndụ na ụlọ ọrụ biopharma-yana ndị Salutaris na mmekorita ya na nnwale nnwale ule. Ltd (TAG) na -enye ule COVID na PCR n'ọdụ ụgbọ elu Liverpool John Lennon.
Emebela ụlọ nyocha ọhụrụ ahụ iji mee nnwale 500 kwa ụbọchị mana enwere ike ịbawanye ya n'ụzọ dị mfe iji kwado ule 1000 na karịa ma ọ bụrụ na achọrọ. A nabatara Source BioScience na ụkpụrụ ISO 15189: 2012 ma bụrụkwa DHSC edepụtara na-eweta nnwale COVID-19.
Ọrụ TAG, ndị Salutaris, na Isi BioScience nyere na -enyere ndị njem ụgbọ elu aka na ọdụ ụgbọ elu Liverpool John Lennon na ndị na -efe site na ndị ọzọ. Ọdụ ụgbọelu UK ya na ọrụ nnwale Rapid Fit to Fly nwere oge ntụgharị nke awa 3, yana ọrụ nnwale 24 hour Fit to Fly. A na -anakọtakwa nlele na saịtị dị na Liverpool ma hazie ya na isi ụlọ nyocha Source Source Bioscience na Nottingham na -enyere Day 2, Day 8, Nnwale maka Mwepụta na ọrụ nnwale PCR COVID maka ndị ahịa.
Na -ekwu maka akụrụngwa ọhụrụ na Ọdụ ụgbọ elu Liverpool John Lennon, Onye isi azụmaahịa Lucy O'Shaughnessy, kwuru, sị:
“Anyị nwere obi ụtọ ịbụ ọdụ ụgbọ elu mbụ na UK nke nwere ụdị ọrụ na ọrụ pụrụ iche. Ọdụ ụgbọ elu Liverpool John Lennon nwere ike nye ndị njem ụgbọ elu anyị nwere ọnụ ahịa ụlọ nnwale COVID ọgbara ọhụrụ na saịtị ebe a n'ọdụ ụgbọ elu ka anyị na-amalite ịmaliteghachi usoro ụgbọ elu anyị ma nwekwuo ndị njem na-efe efe ọzọ. Ọdụ ụgbọ elu na -agba mbọ mgbe niile ịnye ndị ahịa anyị ọrụ kacha mma enwere ike n'oge niile. Na -arụkọ ọrụ ọnụ na ndị otu nnwale nnwale (TAG) / ndị Salutaris na BioScience Source na -enyere anyị aka ịnye ọrụ nnwale PCR dị mfe ma dị mma nke ndị ọrụ ahụike tụkwasịrị obi na -arụ. ”
Ihe owuwu ọhụrụ ahụ- naanị ụdị ya na ọdụ ụgbọ elu UK- na-arụ ọrụ site na ndị ọrụ ụlọ nyocha anọ gụnyere onye na-ahụ maka mgbanwe ma nwee ndị nyocha PCR 8 na saịtị, onye na-ahụ maka mmiri mmiri Bio Molecular Systems na onye na-agba ọkụ ikuku iji nye ezigbo ngwa ngwa- Usoro PCR oge ruru eru maka ịchọpụta SARS-CoV-2.